မင်္ဂလာပါ ကိုဟ။ ဘယ်လိုလဲ လာချောင်းသွားတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 23 Oct 08 02:15
ထပ်တူထပ်မျှကိုယ်ချင်းစာပြီး ခံစားရတယ်ဆိုရင် ယုံမလားတော့မသိဘူး.. 22 Oct 08 08:45
အစ်ကိုရေ.. သတင်းကြားပြီးတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး.. စိတ်မကောင်းဘူး.. 22 Oct 08 08:44
ပြတိုက်ကြီး အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ ၊၊ သတိရလျက်ပါ 22 Oct 08 08:28
ဆောင်းအခုမှသိရတယ်..တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင် 21 Oct 08 17:00
အစ်ကိုဟတ်.. စိတ်သက်သာအောင်နေပါနော်..။ သတိရနေပါတယ်..။ 21 Oct 08 05:53
အကိုရေ လာလည်ပါတယ် တရားနဲ့ဖြေပါနော်အကို 20 Oct 08 16:09
ဦးလေးဂျီး ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်နော် 20 Oct 08 09:13
သမီး ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်.. ဦးဦးရယ်.. မငိုပါနဲ့ နော်.. 19 Oct 08 11:20
ဦးဦးရေ.. ဖိုးဖိုးဆုံးသွားတာ သမီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဖိုးဖိုး ကောင်းရာဘုံဘ၀ရောက်ပါစေ။ 19 Oct 08 11:19
အစ်ကိုရေ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ 19 Oct 08 00:56
May peace, love, and joy to be with you and your family. 18 Oct 08 22:29
မင်္ဂလာပါ ကိုဟကြီး။ နေကောင်းသလား။ ရက်လည်ဆွမ်းတွေ ပြီးသွားပြီပေါ့၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 18 Oct 08 21:34
ခင်ဗျားလဲ ကျန်းမာရေး၈ရုစိုက်ပါဗျာ 18 Oct 08 21:23
ခုမှသိတယ်ဗျာ မရောက်ဖြစ်တာနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းပါတယ် ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ 18 Oct 08 21:21
နောက်ကျမှ သိခဲ့ရလို့ ညီ့ ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အစ်ကိုရာ။ 18 Oct 08 20:19
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဘလောဂ်တွေလိုက်မကြည့်မိတော့ အစ်ကို ဖေဖေ သတင်းကျွန်တော်မကြားမိဘူးဗျ။ 18 Oct 08 20:18
မရောက်တာ ကြာပေါ. အစ်ကိုရယ် 18 Oct 08 16:12
ဘာမှ မပြောရက် လှို့ ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်ပြီး ပြန်သွားပါတယ။် ကျန်းမာပါစေ။ 18 Oct 08 06:26
အလည်ရောက်ပါတယ်။ ကဗျာမပီ၊စာမမှီလေး ဖတ်သွားတယ်။ ကျန်တာကတော့ အစုံစားပါပဲ။ စားနိုင်သလောက်ပေါ့။ ကျေးဇူးပါ 18 Oct 08 04:21
.. နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ရောက်လာပါတယ်။ .. 18 Oct 08 03:32
မင်္ဂလာပါ၊ ပျောက်ချက်သားကောင်းလှချည့်လား၊ 17 Oct 08 20:33
ကိုဟတ်.. အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလား.. အစစ အဆင်ပြေပါစေ.. 17 Oct 08 15:39
Posted by Heartmuseum at 4:35 PM
သပြေမဂ္ဂဇင်း မှာ ပါခဲ့ တဲ့---